Dhageyso” Wasiir Goodax oo ku hanjabay inay xirayaan Baraha Bulshada haddii qal qal la dareemo | Baahin Media
Dhageyso” Wasiir Goodax oo ku hanjabay inay xirayaan Baraha Bulshada haddii qal qal la dareemo
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa cadeeyay sababaha loo joojin waayay Isticmaalka Baraha Bulshada.
Wasiirka waxa uu sheegay in Wasaaradda Waxbarashada iyo laamaha amniga ay awood buuxda saareen in markale uusan fashil ku imaan Imtixaanka,hayeeshee ay warqad u gudbiyeen maxkamada sare taas oo ku aadan in hadii ay Qatar dareemaan la joojinayo Isticmaalka Baraha Bulshada.
“Runtii hadii ay baahi timaado Maxkamada xukunkaas waa noo ridday mahad haka gaarto, hadda wasaaraddu waxa ay heystaa saacad kasta ay baraha Bulshada ku joojin karto, balse hadda sabab loo joojiyo majirto balse hadii aan Qatar dareeno waan joojinaynaa.”ayuu yiri Wasiir goodax.
Waxaa uu hadalkiisa intaasi ku daray in dadaal hadii la sameeyo in ugu dambeyn gacan aamin ah ay wax walba ku soo dhacayaan, waxaana uu sheegay in Magaalooyinka uu Imtixaanka ka socdo ay ku sugan yihiin Mas’uuliyiin ka tirsan Wasaaradda waxbarashada Soomaaliya.
In ka badan 31 Kun oo Arday ayaa sanadkaan u fariistay Maanta Imtixaanka Shahaadiga Dugsiyada Sare oo ah mid ku celis ah, kadib markii dhawaan uu fashilmay imtixaanka ay qaadeysay Wasaaradda Waxbarashada laguna arkay maadooyin ka mid ah Baraha Bulshada.